Ikhaya / Blog / Faka iishelufu kwindlu yangasese, kwigumbi lokuhlambela kwangoko phila ngaphezulu kweemitha ezi-5 zesikwere!
2021 / 04 / 11 uhleloBlog 4987 0
Iintsapho ezininzi zinendawo encinci yokuhlambela encinci, okunokwenzeka, isitya sokuhlambela kunye nokuhamba yonke indawo yokuhlambela. Njenge-intshi yendawo, ukuqinisekisa ukuba zombini indawo yokusebenza, kodwa ufuna nokwandisa igumbi lokuhlambela, ukugcinwa okufanelekileyo, eyona ndlela ilungileyo kukusebenzisa kakuhle i-1 ㎡ ngaphezulu kwendlu yangasese.
1㎡> 3㎡, ngaphezulu kweengcebiso zokugcina izindlu zangasese.
Iikhabhathi: musa ukuthatha indawo, kodwa ukwanelisa iimfuno zokugcina.
Izahlulelo: ukwandisa ukusetyenziswa kwesithuba se-façade.
Ileli: zombini izinto zokugcina kunye nezinto zokuhombisa.
Izibuko: wandise ngokubonakalayo isithuba.
Ukuba awunayo indawo yokugcina eyaneleyo kwigumbi lokuhlambela, ungaboleka eludongeni olungenanto emva kwendlu yangasese.
Into yokuqala onokuyenza kukufaka ikhabhathi yodonga ngasemva kwendlu yangasese yokugcina, kwaye ubeke izinto zokuthambisa zemihla ngemihla eziyimfuneko, ezingaphuculi kuphela ukusetyenziswa kwendawo, kodwa ikwenze kube lula ukuyifumana yonke imihla, igqibelele!
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuqinisekisa ukuba unoluvo olulungileyo lwento oyenzayo. Olona dibanisa lutsha kukuqokelela lulongezo olutsha kwingqokelela.
Into yokuqala onokuyenza kukuzama le khabhinethi ilula okanye ishelufu, kwaye uthenge imveliso egqityiweyo kwi-intanethi.
Mhlawumbi ikhabhathi enkulu yokugcina ayilifanelanga ikhaya lakho, kodwa ukubeka isahluli esincinci kulunge kakhulu. Iyakwazi ukumelana nabuphi na ubunzima bezinto, ezinkulu ezinjengemihlobiso eluhlaza, ezincinci ezifana neebhotile zamayeza, ii-cotton swabs njalo njalo.
Ikwayindlela entle yokufumana okuninzi ekhayeni lakho. Eyona njongo iphambili yenkampani kukubonelela ngeyona nkonzo ifanelekileyo kubathengi bayo.
Izahlulo ezintathu ngaphezulu kwendlu yangasese zigcina indawo kwaye zigcina izinto ngaxeshanye, ezingamanqaku ali-100 okusebenziseka.
Ukuba ucinga ukuba ezi zinto zingasentla ziyingxaki ngakumbi, unokukhetha ukubeka ileli encinci ngaphezulu kwendlu yangasese, ebekwe eludongeni, ayizukuthatha indawo eninzi, iitawuli zokugcina, njl.
Unokuxhoma nebhasikithi yokugcina kuyo, igumbi lokuhlambela eliphezulu ngaphakathi ngaphakathi kwaye ugcine indawo.
Isibuko sibekwe ngaphezulu kwendlu yangasese ukongeza ekusebenziseni kwemihla ngemihla, kunye nomsebenzi wokwandiswa. Iipili zinokubonisa, ziphinde zonakalise, kwaye zonyuse ukuqaqamba kwegumbi, ziphindwe kabini ukubonwa kwendawo.
Ukongeza koku ungadibanisa isipili sokuhlambela kunye nesitoreji esakhelweyo ukuqinisekisa ubuhle bodonga ngelixa ubeka izinto ngaphezulu kodonga.
Jonga la matyala angentla, khange sikwazi ukubamba uchulumanco, sifuna ukubuyela ukuyokucoca igumbi labo lokuhlambela, sikhawuleze senze into yokugcwalisa indlu yangasese kwi-1 square metres yendawo.
Ngaphambili :: Uyifaka njani indawo yokuhlamba ngakumbi? Qala kwezi nkalo zine, Ukuqinisekisa ukuba ukuJongwa kweNtle nokuSetyenziswa ngokuLungileyo! next: Ingqele Igagasi Kwakhona! Iimveliso zegumbi lokuhlambela, Ungawuthintela njani ubanda?